ပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်းအက်ဆစ်စပျစ်ရည်စိန်အဖြစ်သိတယ် - တရုတ် Hailan ဇီဝနည်းပညာ
စိတ္တဇ: ရုံပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်းအက်ဆစ်ဖြစ်သည့်ကျိုးဖန်၏သိပ်သည်းသေးငယ်တဲ့အပိုငျးပိုငျးမှပူးတွဲပါသောစပျစ်ရည်, ဖော့ဆို့တစ်ပုလင်းကိုဖွင့်မယ့်ကောင်းတဲ့အမည်ဖြင့်လည်းမရှိ - စပျစ်ရည်ကိုစိန်။ အားလုံးအော်ဂဲနစ်အက်ဆစ်လိုပဲကစက်ရုံအတွက်အစိမ်းရောင်အစိတ်အပိုင်းများများ၏အသက်ရှူကဖွဲ့စည်းသောစပျစ်သီးကိုသီးအရောင်ကာလကနေလာချဉ်စပျစ်သီးဖျော်ရည်၏မိုးရွာသွန်းမှုပိုင်ဆိုင်ပေမယ့်စပျစ်ရည်ကို၏အရည်အသွေးမထိခိုက်ပါဘူး။
အဆိုပါမိတ်ဆွေအချို့တို့အတွက်အဆိုပါစကားလုံး "ပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်း" အချို့ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်နိုင်သည်။ "ပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်း" အဘယ်ကြောင့်, ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းခဲ့သလဲ?
စပျစ်ရည်ကို crystals - စပျစ်ရည်ကိုတစ်ဦးအထူးသဖြင့်အအေးမိပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ကြောင့်ပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်း၏ဖွဲ့စည်းခြင်း, အဓိကပါဝင်ပစ္စည်း, စပျစ်ရည်ကိုပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်းအက်ဆစ် (ပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်းအက်ဆစ်) မှဖြစ်ပါတယ်။ ထိုပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်း crystals ၏အသွင်သဏ္ဌာန်မရှိ, အခြို့သောဥပဒလည်းမရှိ, တခါတရံစေးကပ်, များသောအားဖြင့်ပုလင်းရဲ့အောက်ခြေမှာ, ပခုံးမှပူးတွဲပါသို့မဟုတ်ဖော့ဆို့၏အောက်ခြေတွင်ပေါ်လာပါသည်။
စပျစ်သီးကိုပိုပြီးချက်ပြုတ်, ပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်းအက်ဆစ်၏အချိုးအစားမြင့်မား။ အဆိုပါမြေဆီမှ ပို. သတ္တုဓာတ်ကိုစုပ်ယူနိုင်ရန်အချိန်ကြာကြာ, စပျစ်သီးစပျစ်နွယ်ပင်အပေါ်ကြီးထွားလွန်လျက်ပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်းအက်ဆစ်ပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်းထုတ်လုပ်ရင်ဆိုင်သောဓာတ်သတ္တု။ ဤရွေ့ကား crystals စပျစ်ရည်, ဒါပေမယ့်စပျစ်ရည်ကိုပုလင်းမြို့ရိုးကိုအတွက်မိုးရွာသွန်းမှု, စပျစ်ရည်ကိုရေနံစည်ပေါင်းထဲမှာပုလင်း, ပိတ်ပင်သို့မဟုတ်အစောပိုင်းမိုးရွာသွန်းမှု၏အောက်ခြေနှင့်အတူပေါင်းစည်းမည်မဟုတ်ပါ။ အဖြူရောင်စပျစ်ရည်ကိုပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်းအက်ဆစ်အသွင်အပြင်, အတော်လေးအဖြူရောင်သကြားတူလျက်, ကျောက်သလင်းကျောက်အနီရောင်စပျစ်ရည်, ထို့နောက်သွေးကဲ့သို့နီမောင်းသော crystals ဖေါ်ပြခြင်း, နှင့်အချဉ်ဓာတ် detect လုပ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်မရှိ။
စပျစ်သီးကိုကြောကျခဲသောစပျစ်ရည်၏အရည်အသွေးမထိခိုက်ပါဘူး။ သို့သော်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ link ကိုလည်းမရှိ: စပျစ်ရည်ကို, အချဉ်ပေါက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတော်လေးနှေးကွေးဖြစ်ပါသည်, သောစပျစ်ရည်အနံ့ကောင်းကောင်းကာကွယ်ထားသည်။ အဆိုပါနှေးကွေးသည့်ကစော်ဖောက်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကို, အလျော့နည်းပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်းဟာပုံးတစ်ပုံးထဲမှာ precipitated နှင့်ပိုကပုလင်းအတွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်အဖြစ်ပုလင်းထဲမှာပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်းဟာဝိုင်ပြုလုပ်နည်းများအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလုပ်နှင့်စပျစ်ရည်ကိုထူးမြတ်သောအရောင်အရညျအသှေး၏အမှတ်အသားဖြစ်လိမ့်မည်။
ယင်း crystal အတွင်း၌စပျစ်ရည်ကိုအရည်အသွေးပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး, ကသာအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အထူးသဖြင့်င့်ကျက်မှု၏ဖြစ်စဉ်ကိုအတွက်ကစော်ဖောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ရင့်ကျက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်စပျစ်ရည်, တ္ထုများထုတ်လုပ်ရန်မည်, ရင့်ကျက်သောစပျစ်ရည်၏လက္ခဏာသက်သေဖြစ်။ အဆိုပါမတည်မငြိမ်ပစ္စည်းစပျစ်ရည်ကိုအရသာများ၏သက်ရောက်မှုစပျစ်ရည်, စပျစ်ရည်ကိုပိုပြီးစင်ကြယ်သောဖြစ်လာနိုင်အောင်, ပိုမိုတည်ငြိမ်အရသာဖွဲ့စည်းပုံ, အရသာနှင့်ပိုပြီး mellow ချောဆီအရည်ကြည်ကနေကွဲကွာခဲ့ပြီးကြောင့်ဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသောစပျစ်ရည်ကိုသာအရည်အသွေးပေးပြီးသွားကျောက်တည်သောမိုးရွာသွန်းမှုရပါလိမ့်မယ်။ စင်ကြယ်သောပွင့်လင်းစပျစ်ရည်ကိုလည်းအနည်အနှစ်များပေါ်လာနိုင်ပါသည် - ကြည်လင်သောကျောက် (ဝိုင် crystal ဟာ) ။ စပျစ်ရည်ကိုထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးပုံပေါ်လျှင်, စပျစ်ရည်၏အရသာကိုထိခိုက်မည်မဟုတ်ပေမယ့်ပုံဆောင်ခဲကျောက်ဖွဲ့စည်းရေး restore မှဖျက်သိမ်းရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးနောက်။
စပျစ်ရည်ကိုရှိ "ကျောက်မျက်ရတနာ" ကိုလည်းစပျစ်ရည်ကို၏ဓာတ်သတ္တုအကြောင်းအရာအထူးသဖြင့်မြင့်သောအထေူသောလုလင်ဝိုင်မှာတွေ့ရှိလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကအများစုဟာဆဲစပျစ်ရည်ကိုအထူးမြင့်မားသောများ၏အဟောင်းတွေ, အရည်အသွေးအတွက်တည်ရှိ။ အဆိုပါပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်းသပိတ်ပင်အဆို့ဒါမှမဟုတ်ပုလင်းပေါ်မှာ precipitated သည်ဆိုပါကအချိန်ကြာမြင့်စွာသိုလှောင်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်သည်။ ကျွမ်းကျင်သူများက "အဟောင်းပေးပြီးသွားကျောက်တည်ခြင်း" ကခေါ်ကြီးမား၏ crystal နှေးကွေးစွာအချိန်ကျော်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
အချိန် post: မတ်လ-28-2017